एमसिसीमा अब के गर्ने? भाग-२२४ घण्टामा ४५१ जना को’रोना सं’क्रमित,सं’क्रमितको संख्या ६ हजार नाघ्यो « गोर्खाली खबर डटकम
एमसिसीमा अब के गर्ने? भाग-२२४ घण्टामा ४५१ जना को’रोना सं’क्रमित,सं’क्रमितको संख्या ६ हजार नाघ्यो
काठमाडौं,को’रोना सं’क्रमित हुनेको संख्या ६ हजार नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा नजसंख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार गत २४ घण्टामा ४५१ जना को’रोना सं’क्रमित थपिएका छन्। गत २४ घण्टामा गरिएको ५ हजार ३ सय ६ पिसिआर परीक्षण मध्ये ४५१ जना को’रोनामा को’रोना सं’क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हालसम्म जम्मा १ लाख ३८ हजार ६ सय ८३ जनाको पिसीआर परीक्षण गरिएको छ । यो संगै को’रोनाबाट सं’क्रमित हुनेको संख्या ६ हजार २ सय ११ पुगेको छ । जसमध्ये ५ हजार १ सय ५१ जना आइसोलेसनमा रहेर उपचार भइरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार १ लाख ३३ हजार ८ सय २९ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्।
प्रतिनिधीसभामा पदम गिरि – गच्छदार उम्किए अब अफताब आलम पनि सदनमा देखिन सक्छन्
पुर्व अधिकारजकुमार धिरेन्द्रकी छोरीको प्रेमीसँगको च’र्तिकला (फोटो सहित)